यी अभिनेत्रीले २ करोड दिदापनि किन गरिनन् मेकअप ? यस्तो छ कारण (तस्बिरसहित) – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /Entertainment/यी अभिनेत्रीले २ करोड दिदापनि किन गरिनन् मेकअप ? यस्तो छ कारण (तस्बिरसहित)
दमदार प्रस्सतुतिका कारण दक्षिण भारतकी अभिनेत्री साई पल्लवी बेहद चर्चित छिन् ।
उनकाे दर्शकमाझ एक छुट्टै स्थान बनेकाे छ । उनको केहि दिन अगाडी २९ औ जन्मदिन परेको थियो । अभिनेत्री साई पल्लवीले अहिलेसम्म तामिल, तेलुगु र मलयालम फिल्महरुमा अभिनय गरिसकेकी छिन् ।
सन २०१५ मा रिलिज भएको फिल्म प्रेमबाट उनले अभिनयको सुरुवात गरेकी थिइन । त्यसपछि कहिलेपनि उनले बिगतलाइ फर्केर हेर्न परेन । साई पल्लबीको एक बिशेषता जसले सबैलाइ प्रभावित पारेको छ । उनि जुनसुकै फिल्महरुमा साधारण र कुनै पनि मेकअप बिना देखा पर्छिन्।
साईले एक अन्तर्वार्तामा भनेकी थिइन्, उनको पहिलो फिल्म प्रेमम मा डाइरेक्टरले उनलाई बिना मेकअप अभिनय गर्न प्रोत्साहन गरेका थिए। त्यसपछि डायरेक्टहरुले पनि उनलाई बिना मेकअप अभिनयको लागी प्रोत्साहन गरेका थिए ।
अभिनेता शिब श्रेष्ठको आज जन्मदिन